Home: Saylicipress.Com | Awdal – The Land of Ahmed Gurey
Daawo Video: Trailer Filin Cusub Oo Laga Sameeyey Burcad Badeedda Oo Lamagac Baxay“Kapringer:A Hijacking”
Filinkan cusub oo ay samayntiisa leedahay Denmark ayaa ka sheekaynaya wadahadalada ka dhex dhaca dadka Maraakiibta iska leh, Shaqaalaha, iyo Afduubayaasha (Burcad Badeedda). Continue reading →
Daawo Video: Taliska Ciidanka Booliska Maamulka Somaliland Soo Bandhigay Hub Faro Badan Oo Ay Ka Soo Qabteen Magalada Boorama
Boorama(SPN) Taliyaha Ciidanka Booliska ee Somaliland C/laahi Fadal Iimaan oo uu Weheliyo Taliyaha Qaybta Miinada ee Ciidanka Booliska Cumar C/Laahi Qaasaali ayaa maanta soo bandhigay Laba Boqol oo Hoobiye,kuwaas oo ay ciidamada Boolisku ka heleen Guri ku yaal Magaalada Boorama.
Taliyaha Ciidanka Booliska oo Warbaahinta ugu Waramayay Xarunta Taliska Guud ee Ciidanka Booliska ee Caasimada Hargaysa ayaa tilmaamay in soo qabashada Hubkan ay kaalin weyn ku lahaayeen dadkii lahaa guriga hubkan la dhigay,oo ku soo wargaliyay Ciidanka Booliska in hubkaasi yaalo Gurigooda.
HADABA HOOS KA DAAWO VIDEO IYO WARBIXINTA OO DHAMAYSTIRAN.
Ciidammo Ka Tirsan Booliiska Dalka Kenya Oo Dil Iyo Dhaawac Loogu Geystay Magaalada Gaarisa Ee Waqooyi-bari Kenya
Nairobi(SPN) Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada Booliska Kenya ayaa la dilay mid kalena waa la dhaawacay ka dib markii kooxo hubeysan ay xalay ku weerareen degmada Gaarisa ee gobolka Bari ciidamo Boolis ah oo sameynayey socod roondo ah.
Goob joogayaal ku sugan degmada Gaarisa ayaa sheegay in ciidamada Booliska iyo kooxaha soo weeraray ay dhexmartay tacshiirad socotay muddo daqiiqado ah taasoo laga maqlayey xaafadaha degmadaas.
Kooxaha weerarka soo qaaday ayaa markii dambe goobta ka baxsaday, iyadoo askariga ku dhaawacmay israsaaseyntaas loo qaaday isbitaalka degmada Gaarisa oo iminka lagu daweynayo.
Ciidamo ka tirsan Booliska Kenya oo aad u hubeysan ayaa soo gaaray goobta uu weerarkaas ka dhacay ee ku taala gudaha degmada Gaarisa kuwaasoo wada howlgalo baaritaan ah oo ilaa saaka socda laguna baadi goobayo kooxihii xalay weerarka soo qaaday.
Degmada Gaarisa oo ah xarunta gobolka woqooyi bari Kenya ee Soomaalidu degto ayaa waxaa ku soo laalaabtay dilal, qaraxyo iyo weeraro ka dhacay goobo kala duwan kuwaasoo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad fara badan oo isugu jiray shacab iyo ciidan, mana jiro war ku saabsan weerarkii xalay oo ka soo baxay saraakiisha Booliska dalkaasi.
Falalkan noocan ah ayaa ka bilowday dhamaan qaar ka tirsan gobolada ay soomalidu ka dagto wadanka kenya taas oo sabab looga dhigayaa kaadib markii cutubyo ka tirsan ciidamada kenya ay gudaha u galeen soomaliya.
Magacaabistaydii iyo maagistaydii Laba Isku Lamaanaa (Qormadii 19aad)
Hergeisa(SPN) Weli waxaynu ku jirnaa 28kii Ogos 2012ka. Subaxnimadii hore Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa tilifoon ii soo diray. Wuxu igu yidhi arrin degdeg ah ayaa jira ee ii kaalay ama aan kuu imaaddo. Si dhiillo leh ayuu ii la hadlay, anna waan iska fahmay in ay sheekadii xalay tahay. Aniga ayaa xafiiskiisa ugu tegay. Wuxu ii sheegay xalay markii aanu Madaxtooyada ka baxay in ay isaga iyo Samsam halkii aan ka kacay soo fadhiisteen oo ay mowduucii sii wadeen. Waxa kale oo uu intaa igu daray in Madaxweynuhu soo faray in aanay arrintu codsi ahayn, bal se ay amar tahay oo la iiga baahan yahay in aan ku camal-falo, haddii kale isku-dhac imanayo. Hadalkii Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaan ka yaabay. Waxaan aad ula yaabay isku-dhacan uu qofka iiga dhigay ee uu igu leeyahay haddii kale wuu imanayaa. Maxaa isku-dhacba keenay? Awooddaydii xileed ee Wasiirnimo ayaan adeegsaday oo aan laba Agaasime xilkii kaga qaaday. Wasiirku subaxdaa wuxu igu yidhi maxaad labadan nin u sheegaynaysaa maad kuwii aafadan dhigay eridid. Anna yaabay oo idhi: “Oo kuwee?” Ku-ye mushkiladdan waxa u aabo ah dad aan guriga iyo Madaxtooyadaba ka bixin. Wuxu ku daray intaa hore in xataa hanti-dhowrka ay iyagu u yeedheen. Waxaan la yaabay wuxu hadda iigu sheegayo. Wasiirku waxa kale oo uu igu yidhi nimankan aad xilalka ka qaadday magacaabistooda waxa iska leh Madaxweynaha sida uu xalay noo sheegay, bal se markan wuxu u wakiishay Wasiir Geel-jire. Waan la yaabay, hoosna waxaan isku idhi oo Wasiirku ma wuxu moodayaa in Mudane Siilaanyo aanu hadda is-barannay. Si qabow ayaan ugu jawaabay. Waxaanan ku idhi Madaxweynahana Korneyl iyo Janan amarro bixiya midna kuma aan ogeyn, anigana askarinimo iguma uu ogeyn, arrinna wuxu iga taagan yahay halkii aanu Madaxweynaha xalay ku kala tagnay.
v Isla subaxnimadaa 28kii Ogos, waxa isaguna igu soo kallahay Guddoomiyaha Dawan oo ka mid ahaa labadii Agaasime Waaxeed ee aan beddelay. Wuxu iga codsaday in aanu Sabtida sugi karayn ee xilka laga wareejiyo ilaa berri. Waxaan u sheegay sidii go’aanku ahaa in ay Sabtida u soo diyaar-garoobaan xil-wareejinta. Sidaas ayaanu ku kala tagnay. Markii aan Wasiirka Arrimaha Dibadda ka soo baxay, aniga oo Cisbitaalka Guud hor maraya xilli ay saacadduna ku beegnayd ilaa 10.300kii saacadood ayuu Guddoomiyihii Dawan I soo garaacay, waxaanu igu yidhi:
v Waxba uma celin oo aan ahayn: wax kasta oo aad samayn karto samee, laakiin hooyo-caygaa dhaqanka kuu noqday waad qoommamayn doontaa,
Sannad Guuraddii 20 Ee Ka Soo Wareegtay Markii La As-Aaasay Ururka Al-Islaax (Damul Jadiid) Oo Khartuum Lagu Qabtay
Khartum(SPN) Xaflad aad loo soo agasiimay oo ah Sanad Guuradii 20-aad ee kasoo wareegata Markii la yagleelay Xarakada Ismaaliga ah Al-Islaax (Damul Jadiid), taasi oo ay kasoo qeyb galeen Jaaliyada Soomalieed ee kusugan dalka sudan, Arday, aqoonyahano, Macalimiin, Waxgarad, Saxafiyiin iyo Masuuliyiinta sar sare ee Safaarada Soomaalida ay ku leedahay Magaalada Khartuum ee Xarunta Dalka Suudaan.
Munaasabda oo aan loo kala harin ayaa aheyd mid Heer sare ah waxaa ugu horeyn lagu soo Bandhigay Suugaan ka Tarjumaya Maalmaha CIida iyo Qiimaha ay leedahay Wadaniyada, iyadoo sidoo kale ay meesha kusoo Bandhigeen Abwaaniin ka kala Socday Somaliya iyo jabuuti Barnaamijyo ay ku Muujinayaan Hidaha iy DHaqanka Labada Dal ee Walaalaha ah.
Munaasabadan ayaa hadal kooban ka jeediyay Madaxa Kulanka Dhalinyarada Soomaalieed Mudane Yusuf, wuxuuna umahad naqay kasoo qeybgalayaasha Munaasabdan, isagoo umadda Soomaaliyeed ilaahey uga baryay inuu dhibaata heysata ka saaro.
Sidoo kale Masuuliyiintii Goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa Qunsulka Safaarada Somalida ee dalka Suudaan Ibraahim Guure kaas oo sheegay in ardayda looga baahan yahay in ay lashaqeeyaan Dowladda Federaalka si looga baxo dhibaatada heysata Dowladda, isagoo intaa raaciyay in dowlada aynan shaqeyn karin hadii aan lahelin dad la shaqeeya.
Qunsuka ayaa Mahad Balaaran usoo jeediyay Dowladda Dalka suudaan oo uu Sheegay in ay Gacan tii ugu wanaagsaneyd ay siisay Somalida kuwaas oo u oomanaaa Waxbarashada.
Munaasabadan oo ah Mid Sanadkasta Maalinta Sadaxaad ee Ciidul Adxaha ah Lagu Jamciyo Dhalinyarada Somaliyed ee Reer Suudaan ayaa waxaa soo Qaban Qaabiyay Kulanka Dhalinyarada Soomaaliyeed ee Suudaan (Islaax-Damul Jadiid) iyadoo ay Munaasabadan ku soo idlaatay Jawi heer sare ah aan hore loo arag.
Guddomiyaha Baarlamanka Oo Sheegay In Qorshaha Baarlamanka Afarta Sano Ee Soo Socota Ay Tahay La Xisaabtanka Xukuumadda
Muqdsiho(SPN) Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharraxaadka ka bixiyey dejinta Istaraatiiijiyadda Barlamaanka iyo waxa uu hiigsanayo, isagoo dhinaca kalena shacbiga Soomaaliyeed ku boggaadiyey in ay ballaariyaan kalsoonida ay ku qabaan Barlamaankooda
Guddoomiyaha Barlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” oo wareysi dhinacyo badan taabbanaya siiyey Radio Muqdisho ayaa ka warramay Istaraatiijiyadda uu ku shaqeyb doono Barlamaanka Soomaaliya iyo kulammo looga arrinsanayo, waxa uu intaa raaciyay in ay ku sii talagalayaan waxa ay hiigsan doonaan sannadaha soo socda.
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Baarlamaanka ay ka go’antahay la xisaabtanka xukuumadda iyo hey’adaha kale ee dowladda, taasina ay tahay howsha kaliya ee ay uga wakiilka yihiin shacbiga Soomaaliyeed.
Mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari ayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku boggaadiyay in ay sii xoojiyaan kalsoonida ay ku qabaan Barlamaankooda, isla markaana ay ka qeyb qaataan wax walba oo qaranka Soomaaliyeed horumarkiisa ah.
Waxaa si dar dar leh ku socda howl sanadeedka Baarlamaanka Soomaaliyeed, taasi ay bar bar socdaan dhismaha hey’adaha dowladda Soomaaliyeed, si loo anba qaado isbaddelka siyaasadeed ee ka hirgala Soomaaliya, waxaana la rajeynayaa in sanadaha soo socda dalkeenna lagu baahiyo horumarka laga gaaray dhinacyo badan oo uu amnigu ugu horreyso.
Hadalkan guddoomiyaha baarlamaanka Somalia ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo lagu wado in dhawaan lasoo dhiso xukuumad iyo iyadoo xildhibaanadu ay maalmihii lasoo dhaafay ka shaqeynayeen qorhshe howleedkooda afarta sano ee soo socota.